Labo Laacib oo CAAN ah oo ka tagaya Premier League si ay uga qeyb qaataan Dagaal Militery oo Culus…(AQRI SHEEKADAN YAABKA LEH) – Gool FM
Labo Laacib oo CAAN ah oo ka tagaya Premier League si ay uga qeyb qaataan Dagaal Militery oo Culus…(AQRI SHEEKADAN YAABKA LEH)
Byare March 18, 2018
(England) 18 Maarso 2018. Premier League ayaa Dagaal Militery ku wayn doona labo ka mid ah xiddigaheeda ugu caansan.
Weeraryahanka Tottenham Heung-Min Son iyo xiddiga qadka dhexe ee Swansea City Ki Sung-Yueng ayaa isku diyaarinaya dagaal Militery haddii laga soo woco dalkooda South Korea.
Ki Sung-Yueng ayaa isagu soo maray Afar usbuuc oo tababar Militery oo aad u adag halka laacibka Spurs uu heysto ilaa dhammaadka 2019 si uu u soo qaato 18-bilood oo tababar qasab ah.
Labada wiil ee ka soo jeeda Koonfurta Korea ayaa xalay isaga hor yimid sideed dhammaadka FA Cup iyadoo ay Toteenham ku adkaatay 3-0.
Son, 25,-jir ah ayaa isagu heysta ilaa dhammaadka 2019, si uu waajibkiisa u soo guto isla markaana uu u soo qaato 18-bilood oo tababar Militery ah.
Laakiin xiddiga qadka dhexe ee Swansea City Ki Sung-Yueng ayaa isagu arrinkan ka baxsaday maadaama uu xulka South Korea kula guuleystay bilada Maarta ciyaarihii Olympikada ee lagu qabtay London, balse sidaas ay tahay misane waxaa lagu qasbay inuu qaato afar usbuuc oo tababar militery oo aad u adag 2016-kii.
Son oo isagu ayaantan wacdaro ka dhigaya Tottenham ayaa isna heysta saddex fursadood si uu uga bad baado tabababarkaasi Militery ee waqtiga dheer.
Haddii uu South Korea la gaaro Afar dhammaadka World Cup, ama uu kula guuleysto kulamada ciyaaraha Asia ee August amaba koobka Asian Cup ee sanada soo socota, Son ayaa isna ka bad baadi doona inuu qaato tababar 18-bilood ah, iyadoo loogu badelayo Tababar waqti gaaban.
“Waa wax aan dhammaan wada xushmeyno. Caddaalad ma ahan in la dhoho waxaad tihii ciyaartooy caan ah sidaa darteed ma sameyanaysaan tababarka Militery,” Ki Sung-Yueng oo sheekeynaya ayaa sidaa yiri.
“Son iyo aniga si gaar ah manoola tacaalayo maxaa yeelay inaan nahay ciyaartooy ka ciyaarta Premier League.
“Waxaa jira South Korean kale kuwa oo sameynaya shaqooyin aad uga muhiimsan ugana qiimo badan in kubbada la laado.
“Iyaguna waa qasab inay sidaa oo kale sameeyaan dhammaan waynu fahansannahay midaa.
“UK iyagu xaalkooda sidaa wuu ka duwan yahay.
“Weli waxaan u qeybsannahay labo dal markasta si rasmi ayaan dagaal baaqi ugu nahay, inkastoo ay jirto xabbad joojin 65 sano ah. Haddii uu dalkeyga ii baahdo waan u taagnaan doonaa diyaar ayaana u noqon doonaa inaan dagaalamo, laakiin si aad diyaar ugu noqoto inaad dagaalanto, waa qasab inaad barato sida loo dagaalamo.
“Dabcan nasiib baan ku lahaa inaan xulkeyga kula guuleystay bilada Maarta, Haddii aan kula guuleysan lahayn waxaan diyaar u noqon lahaa inaan qaato tababarka buuxa ee 18-ka bilood, Son, aniga iyo dhammaan reer South Korea waaxay leeyihiin Caqliyadaas, waa Sharaf inaad dalkaaga u adeegto.
Dhaqanka Wanaagsan waxaa leh Diinteena Islaamka: Arag wixii uu sameeyay Maxamed Saalax kaddib markii uu xalay 4-ta gool ka dhaliyay Watford
LA YAAB! Shan sababood oo Neymar ku qasbaya in uu PSG ka aado Real oo aadan ogeyn....Aqri oo nala wadaag in ay macquul kula yihiin